Cafezee Registration Number — MYSTERY ZILLION
Cafezee Registration Number
August 2009 edited September 2010 in File Request
ကျွန်တော့်ဆိုင်မှာ Cafezee Version 3.3.0 သုံးနေပါတယ်။
အခု License Validation ဖြစ်နေလို့ Registration Number လေးလုပ်ကြပါအုံးဗျာ။
Version အမြင့်တွေ တွေ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Version ပြောင်းရင် တစ်ဆိုင်လုံးက Client တွေပါပြောင်းရမှာမို့လို့ ဖြစ်နိူင်ရင် Version 3.3.0 ရဲ့ Registration လေးပဲလိုချင်ပါတယ်။
ကိုစေတန်၊ ကိုလူပျို၊ ကိုExiter
ကိုပရင့်၊ ကိုစိုင်းကျော်စွာ၊ ကိုAlaxander, ကိုဇာဏီ
ကျန်သော ကိုကို၊ မမ၊ ညီ၊ ညီမများ
ဟာ...ကိုချဲလင်ရယ်..ဇူးပြောထားတယ်လေ..ဒီမှာပါလို ့ဟွန် ့
network error တွေ ဘာတွေလုပ်နေရင်..ဒါလေးခံပြီးဝင်နော်
ရှုပ်နေတာပဲ အဟီး....ကူညီချင်စိတ်တွေ များတွားလို ့ပါ..
Version 3.3.0 မှာသုံးလို့ရလားခင်ဗျ။
ကိုဇာဏီပေးတဲ့ဟာက Version 3.9 ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။
ကျွန်တော်လိုချင်တာက Version 3.3.0 ပါခင်ဗျ။
Software မလိုပါဘူး၊ Registration Number ပဲလိုချင်တာပါ။
ကိုဇာဏီရေ၊ ကူညီလက်စနဲ့ ဆက်လက်ပြီး ကူညီပါအုံးခင်ဗျ၊ ဟီးဟီး။
3.3 တော့မရှိဘူးဗျ 3.6 တော့၇ှိတယ် လိုချင်၇င်နောက်နေ့ပေးမယ်
ကိုဇာနည်အောင် (ယခု)ဇူးဇူးအောင် ပေးသော Cafezee အားအိပ်ရေးပျက်ခံ၍ တစ်ဆိုင်လုံးရှိ Client များအားတင်ပြီးပါ၍ အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အားတက်သရောကူညီပေးကြသော သူများအားလုံးကို ကျွန်တော် ချယ်လင်ဂျာမှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Cafezee 3.6 လိုချင်လို့အကိုရေ .... Demo Version မဟုတ်ဘူးနော်... Full Version လိုချင်တာ...ရမယ်ဆိုရင်လုပ်ပေးပါဗျာ ... ဒီမှာတိုင်ပတ်နေလို့ .... အမြန်လေး လုပ်ပေးပါနော် ... အစ်ကို
အစ်ကိုရေ 3.6 လိုချင်ပါတယ်ဗျာ...ကူညီပါဦး... Demo Version တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော် ... Full Version မှဖြစ်မှာ ... ကျွန်တော့်ဆီမှာ ခဏခဏတိုင်ပတ်လွန်းလို့ ... အမြန်ကူပါဦး .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
aungzawhein wrote: »
ယူစေဗျာ။ လာလေေ၇ာ့ အင့်........:6:
ကျွန်တော်ဆီမှာတော့ညိမ်နေတာပဲ အဲခုတော့သုံးတော့၀ူး 3.9 ကိုပဲသုံးနေတယ် ပြောင်းသုံးကြည့်တာ။ပြောင်းလက်စနဲ့ဆက်သုံးနေတာ 3.6 လောက် မကြိုက်ဘူး ။3.9 မှာ
မကြိုက်ဆုံးကတော့ clients တွေကနေစက် ကိုဖွင့်ပေးလို့မ၇တော့တာပဲ။ ကျွန်တော်ပဲညံ့တာလားမသိ။ operator နဲ့၀င်သုံးလို့၇၀ူး။ မန်ဘာအကောင့်တွေလုပ်ပေးထား၇တယ် ဟွန့်။
ဘယ်ဘက် ထိပ်မှာရှိတယ်...သေချာကြည့် ကြည့်ပါအုံးဗျာ....
cafezee 3.9.9 နဲ့3.9 နဲ့ကတူတူပဲလားဗျာ.......စက်တစ်လုံးက can't open the database. Ensure that the database file existsand it's not open ဖြစ်နေလို့cafezee ကတက်မလာဘူးဖြစ်နေတယ်
cafezee 3.9 version registration number လိုချင်ပါသည်။ member အသစ်ဖြစ်ပါသည်။ အကိုကြီးများ အကိုလေးများ အမကြီးများ အမလေးများ ကူညီမပေးကြပါရန်။
But Now ..... ဆိုျပီးေတာ့ .. Cafezee error ေတြက္ ခဏခဏ တက္တယ္...အစ္ကိုကိုေရ .... အဲ့ဒါကို .. international Full vertion ကုဒ္ ေလးကိုျဖစ္ႏိုင္ရင္ဘယ္ကေနယူရမလဲဆိုတာကို ... အၾကံျပဳေပးပါလား....... ...